Mombamomba ny orinasa - Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
Lead Fluid Technology Co., Ltd. dia orinasa teknolojia avo lenta natsangana tamin'ny Oktobra 1999, ary indrindra manao R&D, famokarana sy fivarotana paompy peristaltika, paompy fitaovana, paompy syringe ary faritra mifandraika amin'ny famindrana tsiranoka. LEADFLUID nahazo ISO9001, CE, ROHS, REACH. Nisisika tamin'ny paompy vaovao vaovao izahay ary nahazo teknolojia patanty. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fambolena, bioteknolojia, filtration, simika, tontolo iainana, indostrian'ny pharmaceutika sns.
Lead Fluid Technology Co., Ltd. dia miasa amin'ny paompy peristaltika, paompy gear, pump syringe ary pump ODM ary mifehy tsara ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny varotra. Izahay dia manao ny karazana lamina mifehy ny rafitra fanaraha-maso mikoriana, ny fanovana, ny debugging ary ny toro-hevitra ara-teknika. LEADFLUID nahazo ISO9001, CE, ROHS, REACH. Nisisika tamin'ny paompy vaovao vaovao izahay ary nahazo teknolojia manana patanty. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fambolena, bioteknolojia, filtration, simika, tontolo iainana, indostrian'ny pharmaceutika sns.
Mifantoha amin'ny teknolojia fototra, katsaho ny hatsaran'ny kalitao. Miorina amin'ny fahamarinana, firaisan-kina ary fanavaozana. Lead Fluid ezahina ho lasa mpitarika indostrialy, hanomezana paompy marefo manavao ny fampitana ny onja.
Soso-kevitra momba ny sanda
Mitady fahalavorariana sy mamorona modely
Ataovy marimarina kokoa sy tsotra ny fampitana ny tsiranoka mikraoba.
Mitarika ny tsiranoka vaovao amin'ny tsiranoka, mihetsika amin'ny fo ny paompy.
Ezaka bebe kokoa, herim-po bebe kokoa, fifandraisana bebe kokoa
Manompoa amin'ny paompy mihoatra ny 20 taona
Vokatra avo lenta, azo zahana ny vokatra rehetra.
Fanajana ny zon'ny fananana ara-tsaina.
Mifantoha amin'ny fikarohana sy fampandrosoana fikarohana tsy miankina
Ekipa teknika matihanina, ekipa mpivarotra peristaltika sy ekipa varotra syringe ary ekipa varotra aorian'ny varotra.
Nahazo mari-pahaizana ISO, CE, ROSH, patanty famoronana maro ary patanty fisehoana.
Fandraisana andraikitra isan-taona
Ny vokatray dia eken'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Ekipa Sales Sales Professional
Manolotra hevitra matihanina sy torohevitra momba ny paompy peristaltika, paompy syringe, paompy odm ho an'ny mpanjifa, hanampy anao hahafantatra hoe inona ny habetsaky ny karazana paompy mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Team Team Surport
Ny fepetra ara-teknika rehetra, na lehibe izany na kely, ny ekipanay Teknika dia handinika ny fepetra takiana ary hanao feedbakc antsipirihany ho an'ny mpanjifa.
Ekipa fanaraha-maso kalitao
Ny vokatra rehetra dia hojeren'ny ekipan'ny fanaraha-maso kalitao, hahazoana antoka fa tsy hanana lisitra olana eo amin'ny Quality Control Manuel ny vokatra rehetra.
Taorian'ny ekipa Sales
Ity ekipa ity dia hikarakara serivisy aorian'ny varotra ho anao, hanome haingana antsipirihany vahaolana momba ny fanontaniana na ny olana natrehinao izy ireo.